'ငါအဖြူရောင်ပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုခြင်းမပြုရန်သေခြင်းတရားခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံလိုက်ပြီ' ။ လူမျိုးရေးစုံတွဲများသည်သူတို့၏အဆိုးရွားဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြသည် - သတင်း
'ငါအဖြူရောင်ပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုခြင်းမပြုရန်သေခြင်းတရားခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံလိုက်ပြီ' ။ လူမျိုးရေးစုံတွဲများသည်သူတို့၏အဆိုးရွားဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုဖော်ပြသည်
Love Island villa မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက် Gabby နှင့် Marcel တို့သည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးအတွက်သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအလွဲသုံးစားမှုများရရှိခဲ့ကြသည်။
Gabby ကသူမအား 'ညစ်ပတ်' သူဟုခေါ်ပြီးသူမလူမျိုးကိုလူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမျိုးများအကြားဆက်ဆံရေးတွင်ရှိခဲ့ဖူးသူများသို့မဟုတ်၎င်းတို့နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများထံမှရရှိခဲ့သောအဆိုးဝါးဆုံးအလွဲသုံးစားမှုအချို့နှင့်၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်များအကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့သည်။
Ann Arbore မိုင်အတွက်ပီဇာအရပ်တို့ကို
#mytingsbuff ကျွန်တော့်မိန်းမကဘယ်လောက်လှတယ် ငါ #myouldering ကြည့်လုပ်နေတာငါ #reunion များအတွက်နွေးလာပြီ။ #garcel #loveisland #aftersun #love
ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်၊ ညနေ ၁၂:၂၅ အချိန်တွင် Marcel Somerville (@marcel_rockyb) မှတင်ပြသော post ကို။
အထူးသဖြင့်သူ၏ချိန်းတွေ့ခြင်းသမိုင်းတွင်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သည်ကိုကျွန်ုပ်မြင်သောအခါ၊ ငါ၏အရပ်ရှည်ရှည်၊ အဖြူနှင့်အပြာရောင်မျက်လုံးရည်းစားကိုမဆွဲဆောင်နိုင်ဟုကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းခံစားမိသည်။ သူကအထီးအလှတရားစံနှုန်းနဲ့အညီနေတယ်။ ငါကအမျိုးသမီးစံသတ်မှတ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းဘူး၊ မင်းကသူတို့နဲ့အတူဘာကြောင့်ရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုမင်းမေးခွန်းထုတ်နေတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်သူအားကျွန်ုပ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလှပသည်ကိုရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားပိုမိုစိတ်ချရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
နောက်ထပ်အခက်အခဲareaရိယာကတော့လျှို့ဝှက်ချက်ပါ။ ငါ့ယဉ်ကျေးမှုရှိလူအများကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်၏မိဘများကသူကဲ့သို့သောသူကိုဘယ်တော့မှလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူ့မိသားစုကအရမ်းကိုနွေးထွေးပြီးနွေးထွေးတယ်၊ ပြီးတော့သူကကျွန်တော့်ကိုငိုချင်နေစေတယ်၊ Hanna, 24, ဘာမင်ဂမ်
ငါအမည်မသိသေမင်းခြိမ်းခြောက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်, ငါအဖြူကောင်လေးနှင့်အတူနေစဉ်များအတွက် Desis အားလုံးကိုအရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်ငါ့ကိုပြောပြတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့ပြောတာ၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမရဖူးဘူးလို့ပြောတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည် p * ki နှင့်အတူရှိနေခြင်းကြောင့်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောသူဖြစ်ပြီးသူထိုက်တန်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ စာသားအရငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူသည်“ ဖြူစင်သောအဖြူရောင်လူမျိုးကိုဆက်လက်ခွင့်မပြု” သောကြောင့်အသေခံထိုက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Rajane, 25, လန်ဒန်
ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားဟောင်းကကျွန်ုပ်သည်လူမည်းဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကို fetishised လုပ်ခဲ့သည်
ကျွန်မ၏ပထမ ဦး ဆုံးရည်းစားမှာသူမ 'အရောင်ကန်းခြင်း' ဖြစ်သည်ကိုအလွန်ပြတ်သားစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကာလတွေမှာသူမကကျွန်မဆီလှည့်လာပြီး 'မင်းသိတယ်၊ မင်းဟာမင်းရဲ့အမည်းရောင်ပဲဆိုတာသိရုံလေးပဲ' လို့ပြောခဲ့တယ်။ သူမ၏အားလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုပြန်ပြောပြခြင်းသည်လည်းထိုကဲ့သို့သောတိုက်ပွဲဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံကစူပါပါးနေပြီဆိုရင်သူမကြိုးစားပြီးဖြူဖြူဖြူဖွေးလိမ့်မယ်။
ငါနှင့်နောက်ထပ်ဆက်ဆံရေးသည်အလွန်ဖက်ဆစ်ဆန်သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ 'ကြီးသောနှုတ်ခမ်းကြီး' ကိုမည်မျှချစ်ကြောင်းနှင့်လူမည်းများကသူမမည်မျှပူပြင်းနေသည်ဟုသူမအမြဲပြောနေသည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏ 'မြည်းကောင်ဆီ' အကြောင်းမကြာခဏမှတ်ချက်ပေးလေ့ရှိသည်။ လူမည်းတစ်ယောက်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ပြောဆိုရန်မြည်းများစွာရှိသည်မဟုတ်သော်လည်း၊ အမ်မလီ, 20, Somerset
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိရည်းစားမှာအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားသူမည်သူမဆိုအားအော်ဟစ်နေသည့်အကြွင်းမဲ့ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ထိတိုင်မည်မျှထူးခြားသည်ကိုမှတ်ချက်ပေးသူများစွာရှိသည်။ ငါတို့နှင့်နီးသောသူများပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေး၏လူမျိုးရေးသဘောသဘာဝကိုအပြစ်မဲ့စွာမှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။ ငါထင်တာကဒီထက်ပိုနာတာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုဖော်ထုတ်ဖို့လွယ်ကူပေမယ့်မသိစိတ်ကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကအခက်ခဲဆုံးစကားစမြည်ဝိုင်းများနှင့်ခုခံကာကွယ်မှုရဲ့အဆိုးဆုံးအမျိုးအစားများကိုထုတ်ဖော်ပြသတယ်။ Sayed, 26, Nottingham
ဒါကြောင့်ငါတို့တွေဟာမင်းရဲ့ကလေးတွေကိုအရမ်းချစ်စရာကောင်းလိမ့်မယ်” ဆိုပြီးအများကြီးပြောခဲ့တယ်။ ငါနဲ့ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကကြည့်ကောင်းနေလို့သူတို့ပြောနေတာလား။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကငါတို့ကို fetishising နေကြသနည်း ဒါဟာအကောင်းဆုံးမှာ micro ကျူးကျော်ပါပဲ။
ကျွန်တော့်ရည်းစားကအိုင်းရစ်မြို့ငယ်လေးမှာနေတယ်။ ငါကလန်ဒန်မှာနေတယ်။ ဒါကြောင့်သူကငါထင်တာထက်သူ့မျက်နှာကိုပိုပြီးရယ်စရာကောင်းတဲ့မှတ်ချက်တွေပေးတယ်။ မြို့ထဲသို့သူလာနေသောသူ၏အနက်ရောင်ရည်းစားကအမြဲတမ်းအနည်းငယ်ကြည့်သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်သောမျက်လုံးများရရှိသည်။ ဒါကငါ 'ရံဖန်ရံခါ get' 'ဒါကြောင့်သင်ထို့နောက်လူမည်းယောက်ျားတွေချိန်းတွေ့ကြဘူး?' 'ဟုပြောသည်ခံရ ငါပြေးပြိုင်ပွဲမှာသစ္စာမဲ့သူတစ်ယောက်လိုငါ့ကိုကြည့်ကြတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုအုန်းသီးနဲ့ Oreo တို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်မျှမျှတတခေါ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အယ်လာ၊ ၂၁ နှစ်၊ လန်ဒန်
လူတွေဟာကျွန်တော့်ရဲ့အာရှရည်းစားဟောင်းရဲ့သေးငယ်တဲ့ဘောင်ကို“ ဖျက်ဆီး” တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်ရယ်ပြုတတ်ကြတယ်
ကျွန်တော့်ရည်းစားဟောင်းတ ဦး မှာအာရှသားဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်သူမ၏ဘောင်ငယ်ကိုဖျက်ဆီးတော့မည်ဟုလူများကမှတ်ချက်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူမည်းများ၏အပူလွန်ကဲသောအပူပိုင်းဒေသများပေါ်တွင်မှီခိုအားထားနေရခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားလက်ကိုကိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောသာမန်လုပ်ရပ်များကိုပင်လုပ်နေသကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မသေချာမှုဖြစ်စေသည်။
ဒုတိယတွေ့ကြုံမှုကကျွန်မရဲ့ရည်းစားကိုအာဖရိကတိုက်ကရစ်ဘီယံဆောင်ပုဒ်ပါတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဖြစ်သည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးနေတုန်းကျွန်မရည်းစားကတတ်နိုင်သလောက်မ ၀ င်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ငါတတ်နိုင်သမျှအားလုံးပါ ၀ င်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီမှာရှိနေခြင်းအားဖြင့်မသက်မသာခံစားနိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ 'အနက်ရောင်' နဲ့ 'အဖြူရောင်' နေရာများအိုင်ဒီယာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ငါသဘောပေါက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် ။ Jon, 22, ရှက်ဖီး
မနေ့ကမိသားစုနဲ့သူငယ်ချင်းအားလုံးအိမ်ပြန်လာတာကောင်းတယ်။ #auntygabby #neice & #nephew
၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၂၆ ရက်နံနက် ၁း၃၀ နာရီတွင် Marcel Somerville (@marcel_rockyb) မှတင်ပြခဲ့သည်
အထူးသဖြင့်လူမည်းတွေကငါ့ရဲ့လူမျိုးအပြင်ဘက်ကချိန်းတွေ့တာကိုသစ္စာဖောက်သူလိုသဘောကျတယ်။ ငါ့ရည်းစားကသူ့အဘိုးအဘွားကငါတို့ကိုဘယ်တော့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးသည်ကမ္ဘာကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုစည်းလုံးစေသည်ထက် ပို၍ စည်းလုံးစေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အချင်းချင်းကိုအလွန်ချစ်ကြသည်။ ဘက်တီ၊ ၂၁ နှစ်၊ လန်ဒန်
ဉာဏ်စမ်းပဟေ:ိ - Glee ထဲကမိန်းကလေးကဘယ်ဟာလဲ။
ဘယ် Zac Efron ကိုသင်နောက်ဆုံးရမလဲ ထွက်ရှာတွေ့မှဤပဟေTakeိကိုယူပါ
Love Island Gossip ကော်လံ - Amber နှင့် Anna တို့သည် PornHub တွင်ရှိသည်။ Plus အား Anton ရဲ့ဝတ်လစ်စလစ်ပေါက်ကြားရရှိသွားတဲ့
ငါပထမ ဦး ဆုံး Glee ရာသီ rewatched နှင့်ဤလူများအဘယ်သို့ရိုးရိုးသားသား?
Netflix ၏ doc 'Murder To Mercy' မှ Cyntoia Brown သည်ယခုတိုင်အောင်ဘာလဲ။
အဆင့် - ဆယ်ကျော်သက်တီဗီသမိုင်းမှာတရားဝင်အဆိုးရွားဆုံးရည်းစားကဘယ်သူလဲ။
သငျသညျတော်ဝင်အရာခပ်သိမ်းနှင့်အတူစွဲလမ်းဖြစ်လာလျှင်, The Crown တူသောရှိုးရှစ်ရှိပါတယ်
လိဒ်လတ်ဆတ်သော '' ဝတ်လစ်စလစ်များအတွက်ဖန်တီးနက်နဲသောအရာ Snapchat အကောင့်